नेपाल आज | वामदेवको संसद पस्ने तयारी : नेपाली राजनीतिमा फेरि ग्रहण लाग्ने संकेत
वामदेवको संसद पस्ने तयारी : नेपाली राजनीतिमा फेरि ग्रहण लाग्ने संकेत
बुधबार, २३ साउन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
काठमाडौं । वामदेव गौतम राजनीतिमा आउनु अघि के गर्थे ? यो प्रश्नको उत्तर बडो रहस्यमय छ । कसैले भारतीय सेनाका भगौडा सिपाही हुन् भनेका छन् भने कसैले भारतीय रेल्वेका चौकीदार थिए भन्ने गर्छन् । यी दुवै कुराको आधिकारिता छैन । यसकारण राजनीति अघिको उनको पेसाबारे केही खुलेको छैन ।
तीन पटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएर प्रहरी र सिडिओहरूको हुर्मत लिएका वामदेव पहिलो पटक गृहमन्त्री हुँदा ७५ नै जिल्लाका सिडिओ सरुवा गरेर कर्मचारीतन्त्रमा ‘आयो जंगे’ को सन्त्रास फैलाएका थिए ।
उनीसँग निकै लामो र नजिक भएर सहयात्रा गरेका प्रदीप नेपालले एकपटक खुलामञ्चबाट भाषण गर्दै भनेका थिए, ‘यो देशमा सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्ति कोही छ भने ती वामदेव गौतम हुन् ।’
यस्तो किन भन्नु भएको थियो भनेर प्रदीप नेपाललाई अहिले आएर सोध्दा उनले भने, ‘मैले वामदेवलाई भ्रष्ट भनेकै हो । तर सबैभन्दा ठूला भ्रष्ट चाहिँ वामदेवलाई होइन खुमबहादुरलाई भनेको थिएँ ।’
२०५३ सालमा ध्रुवबहादुर प्रधान र अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरणमा जुन खेल वामदेवले खेले त्यसबाट नेपाल प्रहरीमा औपचारिक रुपमा राजनीति प्रवेश र्गयो । अथवा भनौं नेपाल प्रहरीमा राजनीतिकरण गरेर संगठन ध्वस्त पार्ने खलनायक नै वामदेव गौतम हुन् ।
गूटको राजनीति र फुटाउको खेलका पनि उनी नायक नै हुन् । महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने नाउँमा यिनले सहाना प्रधानलाई अध्यक्ष बनाएर आफू महासचिव बनेर नयाँ पार्टी खोले । निर्वाचनमा लज्जास्पद हारपछि उनी फेरि नेकपा माले सिध्याएर एमालेमा फर्के । उनले फुटाएर बनाएको नेकपा माले अझै जीवित छ, सिपी मैनाली त्यो पार्टीका अध्यक्ष छन् ।
बितेका सात वर्षमा ३८ क्विन्टल सुनको अवैध कारोबार भएछ , पछिल्लो अनुसन्धानले यही भन्छ । बितेका सात वर्षमा वामदेव गौतम पनि एक पटक गृहमन्त्री भएका थिए–सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला । सात वर्षभन्दा अगाडि उनले दुई पटक गृहमन्त्री पड्काइसकेका थिए । त्यो बेलामा भएको सुनदेखि नुनसम्मको तस्करीको भाग यिनले मात्रै पाएनन् भन्ने कुरामा कति विश्वास गर्ने ? त्यसमाथि सुन तस्करीसँग उनका छोरा हरिश गौतमको सम्बन्ध अटुट छ भन्ने चर्चा पनि हुने गर्छ ।
गृहमन्त्रीले नचाहेसम्म गृहमन्त्रालयको हावाले पनि आफूखुसी चल्न पाउँदैन भन्ने गरिन्छ । अर्थात् गृहमन्त्री त्यति शक्तिशाली हुन्छ । गृहप्रशासनको आड भरोसामा हुने दुई नम्बरी काम थाहा नै नपाई बस्ने व्यक्ति बामदेव हुन् भन्दा उनकै बेइज्जत हुन्छ ।
सरकारमा जान भनेपछि मरिहत्ते गर्ने यिनका कारण देशकै राजनीति प्रभावित हुन्थ्यो । राजनीतिक अस्थिरता महत्वपूर्ण दोषीहरूमध्ये वामदेव गौतम पनि एक हुन् । यिनी जब जब सक्रिय भएका छन्, देश अस्थिरतामा फसेकै छ ।
वर्तमान सरकारका मुख्य सूत्रधार केपी ओली र प्रचण्डले ‘अहिलेको सरकार पाँच वर्षको लागि हो’ भनेका छन् । हुन त यी नेताले बोलेको कुरा यी पंक्ति लेखिरहने म पनि विश्वास गर्दिनँ, पढ्ने तपाईं पनि विश्वास गर्नु हुन्न । तर पनि यिनकै कुरा जोड्नु पर्ने हुन्छ । वामदेवले नेपाल म्यागजिनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै भनेछन्, ‘मेरा समकालीन सबै प्रधानमन्त्री भइसके । मैले हुन किन नहुने ? प्रचण्डले पनि तपाईंलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न बाँकी छ भन्नु भएको छ ।’
अर्थात् अब फेरि नेपाली राजनीति अस्थिर बनाउन वामदेव गौतम नामक पात्र मैदानमा उत्रिसकेका छन् । केपी ओलीको भाषामा भन्नु पर्दा केही ‘भारतबाट पालिएका छौंडा’हरूले अहिले सरकार ढाल्ने कुरा गर्न थालिसकेका छन् । डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचन गर्ने र वामदेवलाई जिताउने योजना छ । यसको अर्थ उनी संसद्मा प्रवेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् । त्यस्तै हो भने केपी र प्रचण्डले भनेको यो सरकार पाँच वर्षको कसरी भयो त ?
नेता मात्रै होइन हाम्रो देशमा जनता पनि अचम्मका छन् । भरतपुर महानरपालिकामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिलेर रेणु दाहाललाई मेयरमा उठाए । मतपत्र च्यातेर जनमतको अपमान गर्ने माओवादी नै थिए । तर जनताले त्यो देखीदेखी माओवादीकै रेणुलाई मेयरमा जिताइदिए ।
अब डोल्पाबाट धनबहादुरलाई राजीनामा गर्न लगाएर वामदेव उठे भने जनताले उनैलाई जिताइदिन्छन् । देशका मतदाता कस्ता छन् भन्ने बुझ्न चुनाव जितेका बबनसिंह, रेशम चौधरी, राजेन्द्र महतो, बाबुराम भट्टराई आदिलाई हेर्दा थाहा भइहाल्छ ।
पटक पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री भएर पनि वामदेवले गरेको सम्झन लायक एउटा पनि राम्रो काम भन्न सकिने अवस्था छैन । डिभाइडर नाघेर हिँड्ने गृहमन्त्री वामदेव फेरि पनि गृह वा प्रधानमन्त्री नै ताकेर अगाडि बढेका छन् । उनी फेरि संसद्मा प्रवेश गर्नुको मतलब अर्को कुनै अनिष्टको संकेत हो ।
उपेक्षित वैदेशिक श्रमिक
‘अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ अर्थात ७८ लाखे राजनारायण पाठक
मङ्गलबार, ०७ फागुन २०७५